Kitrok'ireo soavaly sy ny aretiny | Soavaly Noti
Monica sanchez | | Aretin'ny soavaly
Ny soavaly dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo biby izay mifandray akaiky amin'ny olona indrindra. Ity biby ity dia nanjary fitiavam-bahoaka marobe. Ny hatsaran-tarehiny, ny hakantony ary, ambonin'izany rehetra izany, ny andriandahiny no nanana lesoka lehibe tamin'izany. Fa ny fifampiraharahana amin'ny soavaly dia midika hoe manome azy ireo fikarakarana ilaina rehetra, nefa tsy manadino ny ampahany iray tena lehibe amin'ny anatomia azy: ny satroka.
Ary izany dia ho an'ny biby lehibe toy izany, izay manao fihetsiketsehana sy fihetsika manelingelina toy izany amin'ny fotoana maro, ny fitazonana ny tongony amin'ny toe-javatra tonga lafatra dia zava-dehibe, zavatra iray izay misy koa ny hoves. Ireo dia tompon'andraikitra amin'ny lafiny lehibe, amin'ny fanatanterahana ny dian'ny soavaly amin'ny fomba tsara, ho fanampin'izay, mifandray mivantana amin'ny tany sy ny tany izy ireo.
Na dia toa tsy izany aza, misy aretina sy areti-mifindra maro izay manafika ary misy fiantraikany mivantana amin'ny kitrokely. Ny fahalalana ny soritr'aretina sy ny fianarana miady amin'izy ireo dia lakilen'ny fiantohana ny fiadanan'ny soavalintsika.
Raha tsy fantatrao tsara hoe inona ireo aretina ireo dia horesahintsika ato amin'ity lahatsoratra ity izy ireo.
2 Kongo maina sy vaky
7 Ampahany amin'ny kitron-tsoavaly
8 Ahoana no hikarakarana ny soavaly soavaly
Ny Candidiasis dia mety ho iray amin'ireo aretina mitranga indrindra amin'ny kitron-tsoavaly. Vokatry ny bakteria mitombo sy mihabetsaka rehefa tena manohana ny hamandoana..
Io bakteria io dia manomboka manimba sy mamongotra ireo sela manamboatra ny kitrony, ary manimba azy aza rehefa tena mandroso tokoa izy io. Mora ny mamantatra azy satria mamokatra fofona mahery sy mampiavaka azy io.
Mora ihany ny fanafoanana azy, satria eny an-tsena dia hitantsika eo am-pelatanantsika ireo vokatra maro karazana izay hamongorana azy tanteraka. Mba hisorohana ny fisehoany dia ampy amin'ny fanadiovana tsy tapaka sy ny fahadiovana araka ny tokony ho izy izany, na amin'ny vatan'ny biby na amin'ny habaka onenany.
Kongo maina sy vaky
Ny toe-javatra iray hafa mahazatra indrindra dia ny soavalintsika manana hoves tena maina sy vaky, izay mety hivadika flakes sy triatra.
Ity patolojia ity dia mitranga rehefa mihetsiketsika foana ny soavalintsika ary mandeha amin'ny sehatra mafy be toy ny asfalta, rehefa mitondra enta-mavesatra ianao na koa rehefa ampiana mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fiainana any anaty tontolo maina sy maina sy maina.
Abscesses dia vokatry ny pathogen maromaro manaparitaka ny hoofs ny soavaly. Ireo pathogens ireo dia mety misy karazany isan-karazany ary amin'ny farany dia miteraka lozam-pifamoivoizana mafy, mangana ary koa maratra izay miditra amin'ny kitron-tongotra.
Koa satria faritra tsy dia be mponina ao amin'ny lalan-dra ny fiarovan-doha, dia tsy mandaitra ny antibiotika entina am-bava, noho izany dia ilaina ny manisy akora mihetsika mivantana amin'ny fiarovan-doha na ny ratra mahazo azy, manisy fehy sy anti-inflammatories.
Ity angamba no iray amin'ireo toe-javatra tsy fahita indrindra izay hita amin'ny kitron-tsoavaly. Izany dia vokatry ny raharaha tsy fantatra fiaviana izay miditra amin'ny tongotry ny Equine mandra-pahatongany any amin'ny fototry ny hoof, izay milaza fa mety ho ny tranga hisorohana azy tsy haharitra, ny ampahany amin'ny vatan-kazo mihitsy dia tsy maintsy tapahina. Midika ho olana lehibe amin'ny fivezivezena ho an'ny biby io.
Araky ny anarany, io aretina io mihetsika amin'ny taolana navicular amin'ny tongotry ny soavaly, miteraka fivontosana ao amin'ny sela izay manodidina ny taolana mihitsy.
Ny antony dia maro: ny soavaly mitaingina soavaly, ny kitrokely tsy mahomby, ny lanjan'ny biby, sns. Rehefa manana an'io aretina io ny soavaly dia mety ho fantatra mora foana izy io, satria ialana amin'ny fanitsahana na fizarana ny dian-tongotra amin'ny faritra aoriana amin'ny hoofy.
Androany, tsy misy fitsaboana manokana hiadiana amin'ny aretina Navicular, ka azo lazaina fa aretina io fa raha mipoitra dia hiaraka amin'ilay olona mandritra ny androm-piainany. Marina fa misy teknika sasany manampy ireo olana aterak'izany mba tsy ho lasa henjana loatra.
Ny lamina izay mametaka ny taolana amina pedal ao anaty kitron-tsoavaly dia malemy. Izany dia amin'ny fotoana marina tapaka ny firaisan'ny taolana sy ny kitrony ka nahatonga ny voalohany hiodina. Raha ny lojika, ity zava-misy ity dia ny fidirana amina tranga mainty ho an'ny soavalintsika, izay hijaly amin'ny fanaintainana mafy sy mafy, fitarainana hita maso ary maharitra, sns.
Mba hisorohana ny fisehoany dia omena torolàlana vitsivitsy isika hanarahana izany, toy ny: fisorohana ny soavaly tsy hihazakazaka be amin'ny sehatra sarotra, manome azy sakafo tsara izay tsy ampijaliana ny serealy sy ny siramamy na manapaka tsara ny hoho. Raha vantany vao fantatsika fa voan'ny Laminitis ilay soavaly, dia ilaina ny mahafantatra ny fomba fihetsika. Voalohany indrindra, tsy tokony terenay handeha izy, mainka ny asa an-tery, asio hatsiaka amin'ny aroloha ary karazana akora mety hanohitra ny aretina, sns.
Amin'ity fampahalalana rehetra ity dia antenaina fa nanampy anao izahay, ary, mazava ho azy, milaza fa isaky ny manana karazana aretina ny soavalinay Tsy maintsy mandeha any amin'ny veterinera na olona mahay.
Ampahany amin'ny kitron-tsoavaly
Hatramin'ny nanombohan'ny zanak'olombelona ny fiompiana ny soavaly, dia nampiharihary azy fa mihabe ny volon-kodiny. Noho io antony io dia zava-dehibe ny fahalalana ireo faritra samihafa ananany mba hahafahantsika hikarakara azy ireo tsara:
Phalanx voalohany: io no taolana voalohany, izay ampiraikitra ny phalangine.
Phalangina: dia ny taolana afovoan'ny rantsantanana.
Corona: dia ny ampahany mivoaka izay hita eo ambonin'ny fiarovan-doha.
Nail: ampahany amin'ny satroka.
Phalangeta: dia ny taolana fahatelo amin'ny claw.
rindrina: ampahany ivelany amin'ny satroka.
Pulpejo: ampahany be amin'ny rindrina.
ombelahin-tongony: misaratsaraka ao ambadiky ny tongotra.
sahona: io no ampahany mahavariana sy malefaka ary malefaka izay eo ambanin'ny fiarovan-doha.
Lagoon medial: habaka foana izy io eo afovoan'ny fiarovan-doha.
Sesamoid kely: dia taolana metatarsaly kely.
Palma: dia ny ampahan'ny tongony mifandray amin'ny tany.
kitron-tsoavaly: moa ny kiraro vita amin'ny vy izay miraikitra amin'ny kitron-tsoavaly.
Ahoana no hikarakarana ny soavaly soavaly
Mila fikojakojana matetika ny kitron'ny soavaly. Mba hanaovana izany, ny zavatra tsy maintsy ataonao dia manadio azy ireo amin'ny mpanadio fiarovan-doha, manala ny loto sisa tavela. Ho fanampin'izay dia tena ilaina tokoa ny manome lanja manokana ny fanadiovana ny sahona, satria any amin'ilay faritra iangonan'ny bakteria izy io.
Tokony hojerentsika izany tsy misy ratra, tsy misy triatra, tsy misy fofona ratsy. Raha misy dia hokarohinay amin'ny aretina manokana ilay aretina.
Farany, hijery ny soavalin-tsoavaly isika, izay tsy maintsy alamina tsara.
Ny fiarovan-doha sy ny fikojakojana azy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Aretin'ny soavaly » Aretin-tsoavaly
azafady, ny aretina masirasira dia vokatry ny holatra antsoina hoe candida albicans, noho izany dia tsy aretina mikraoba mihitsy izany.
Wousvel Jean Jacques dia hoy izy:
Nuria tena tsara! Candidiasis dia aretina azo avy amin'ny bakteria ,,,, fa tena tiako ny fomba fisorohana napetrak'i Maria: manampy betsaka ny fanadiovana ny volo isan'andro, ary tsy hijanona amin'ny faritra mando tsy tapaka koa ny biby ...
Mamaly an'i Wousvel Jean jacques
INONA NO dikan'ny fisehoan'ny peratra amin'ny HELMET?
Valiny amin'i JUAN ANTONIO
Rehefa manadio ny kitrok'akanjoko aho, dia miala ny sombin-kitroka kely, toa mora milatsaka izy, inona ny aretina? Ary ny fomba hialana amin'izany dia manampy
Pascual dia hoy izy:
Manana marevaka aho izay avelako amin'ny ririnina tsy misy kiraro soavaly ary manana tongotra fotsy fotsy volo be izy, inona no azoko atao?
Mamaly an'i Pascual
Ahoana no matory soavaly?